रणवीर कपुरको यो फिल्ममा के थियो यस्तो ! फिल्म हेरेपछि धेरैले जागिर, छोडे « Gaunbeshi
रणवीर कपुरको यो फिल्ममा के थियो यस्तो ! फिल्म हेरेपछि धेरैले जागिर, छोडे
प्रकाशित मिति : 1 February, 2022
एजेन्सी, बलिउड अभिनेता रणवीर कपुरले अहिलेसम्म धेरै उत्कृष्ट फिल्ममा अभिनय गरेर दर्शकको मन जितिसकेका छन् । उनले धेरै हिट फिल्म दिएका छन् र धेरै अभिनेत्रीहरूसँग पनि काम गरेसकेका छन् । तपाईहरुलाई थाहा छ रणवीर कपूरको फिल्म हेरेपछि धेरैले आफ्नो जागिर छोडेका थिए। यसको खुलासा चर्चित फिल्ममेकर इम्तियाज अलीले गरेका छन् ।
रणवीर कपुरले इम्तियाज अलीको रकस्टार र तमाशामा काम गरिसकेका छन् । फिल्म तमाशामा उनको साथमा नायिका दीपिका पादुकोण मुख्य भूमिकामा थिइन् । चलचित्र तमाशा सन् २०१५ मा हलमा रिलिज भएको थियो । चलचित्रले दर्शकबाट उस्ता प्रतिक्रिया पाएको थिए । यो फिल्मको कथा सपना र जोश पूरा गर्नेमा आधारित थियो, जुन धेरै उतारचढावहरू पार गर्छ।
इम्तियाज अलीले ठट्टा गर्दै भने, ‘म उसलाई भन्छु, तपाईले रोजेको पेशामा साँच्चै राम्रो गर्नुहोस्, यदि तपाई फेल हुनुभयो भने तपाईले मलाई फेला पार्नुहुनेछ, मलाई मार्नुहोस् कि तपाईको कारणले मैले सबै छोडेँ।’ यस बाहेक इम्तियाज अलीले अन्य धेरै काम गरेका छन् ।
यस विषयमा तमाशा निर्देशक इम्तियाज अलीले अंग्रेजी वेबसाइट हिन्दुस्तान टाइम्ससँग कुरा गरेका छन् । यस क्रममा उनले आफ्नो फिल्मी करियर र व्यक्तिगत जीवनका बारेमा धेरै कुरा गरे । फिल्म तमाशाका सम्बन्धमा इम्तियाज अलीले यो फिल्म हेरेपछि धेरैले आफूकहाँ गएर इम्तियाज अलीलाई फिल्म तमाशा हेरेपछि जागिर छोडेको बताए ।रणवीर यतिबेला आफ्नै धेरै फिल्मलाई लिएर चर्चामा छन् ।